Carter ngokuthi wonke phansi uMbhalo yenjini. Sump - isici esikhiphekayo, ukubunjwa kusukela uthayela noma aluminium inkatho. Umniningwane ingxenye engezansi motor.
Ikhaya Pallet umsebenzi onobuhle eziseqophelweni izinjini - ukunqwabelana kanye yokugcina uwoyela, okuyinto ogeleza usuka motor izingxenye. Futhi, njengoba sekuphawuliwe kakade, sump ivikela izingxenye yangaphakathi emathonyeni nolaka kwemvelo. Ngisho ezansi Pallet eqoqwe metal izinhlayiya ekhiqizwa ngenxa ukugqoka friction izingxenye. Ngaphezu lemisebenti, into esiza Ukupholisa amafutha engine, futhi ivikela uketshezi lubricating kusukela wachela.
Ngokuvamile, le piece ekhiqizwa esebenzisa wokushaya, kanye izinto efanelekayo esithambile futhi nezimo grade lezinsimbi. Okubalulekile okunjalo akuyona ekhethwe ithuba - into eqeda ngeke wavele lapho lilimele, kodwa zikhubazekile kuphela. Ithreyi senziwa ngesimo okugeza engajulile. Ngokwengxenye layo elingenhla has indiza nge izimbobo lokubopha. Kuye uhlobo amandla unit and izinga yayo processability, le sump ingaba nezinye, ukuma kaningi eziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe. Lokhu kwenziwa ukuze zigweme ukuthintana zingenzeka izingxenye ukudluliswa noma ukumiswa.
Uma injini uphoqelekile, ugqoko ke kufanele wenziwe aluminium ingxubevange. Ngokuningilizwe kangaka ngempela lwenteke izimbambo okuyinto lula uwoyela indlu. Lapho kushintshwa igrisi sokukhipha udoti, izimoto eziningi abe ipulaki. Sump has umgodi abakhwabanisi nge ngentambo - uma uyasikrufulula cap, ungakwazi ukuba sizikhandle sokukhipha amafutha asetshenziswa. Nokho, umsebenzi oyinhloko le ngxenye - hhayi ukuvikela induku nokuxhuma piston futhi crankshaft, kanye ukunqwabelana kanye yokugcina amafutha. Futhi ezansi isitsha, Pallet ukuqongelela chips, ngenxa bafake umbhangqwana ukuhilizisana. Kuyinto encane ukuze kudlule ngokukhululekile ngokusebenzisa isihlungi uwoyela, futhi kulokhu, ugqoko izenzo njengendlela lemifanekiso yekwentiwa.
Le mininingwane kunjalo elula ukuthi ukuyisusa uhlelo kudingeka basebenze kanzima. Into kuphela ongayenza kwenzeke - zilimele ngenxa ukungqubuzana izithiyo ezahlukene. Kulokhu, valve, itshe, isiqu okungazelelwe kungenzeka umane deform, noma ngezibhakela isici. Ngokuvamile ukulungisa injini undertray edingekayo izimoto ezithwala ne front-wheel drive uhlobo, futhi longitudinal noma transverse injini layout.
Kwenzekani uma ungenawo ukulungisa noma cha ukushintsha pan?
Ngakho, uma le nto lilimele, it is ngokucacile umsebenzi amandla iyunithi. Cabangela ukulimala ambalwa. Uma kwakuba khona ukuhlanekezela ngokujulile izindiza ngaphandle izimbobo kwi motor ne ukuncela amashubhu kanye Pallet ngokwayo eyenziwe aluminium noma plastic, bese kulesi simo kunobungozi ukuthi uwoyela eyamukelayo ishubhu ingaphezu ezingeni uketshezi lubricating. Ngokuvamile nomonakalo onjalo la izingxenye wenze uyeke.
Uma amafutha hhayi leaked, kodwa ukusonteka ayikajuli, udinga uthele isilinganiso esifanele uwoyela, bese uzama ukuqala injini. Endabeni ka deformations ezincane futhi ukungabi khona ukuwohloka abamukelayo uwoyela ngeke ngiwunqamule, kodwa igebe phakathi tube futhi Pallet phansi kakhulu kunciphisa - lokhu kungaba okwanele lolo injini ingaphansi komthwalo ongaphakeme. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi uma Pallet ilimele, nganoma yisiphi isikhathi, injini ingase ibhekane "uwoyela ngenxa yendlala" ngaphansi ukusheshisa kanzima futhi ukwandisa isivinini. Konke lokhu akulona okungcono indlela umthelela kuwo wonke ISIZINDA. Imiphumela ezivamile lamafutha yokulamba - tacking elingenhla yokuxhuma induku amabombo, okuyinto luhambisana nomthwalo ekuthatheni wonke injini. Futhi, liner ungakwazi crank ngesikhatsi kokuhlinzwa. In an icala ngokwedlulele, induku yokuxhuma kuzovula ukuthi ngeke kulimaze block injini.
Indlela yokulungisa sump
Uma sump ngobugebengu ke isinyathelo sokuqala ukuba ngokushesha ukuthulisa injini. Uma loku kungentiwa, ngenxa ukwehla ngokushesha ezingeni lubricating uketshezi eyeka supply yayo amayunithi ezibucayi futhi sizoqala uwoyela ngenxa yendlala.
Ukulungisa Pallet akunzima, ikakhulukazi uma mithandazo ezenziwe ngensimbi. izingxenye ezinjalo zezikhali nokusebenzisa isifaca isando Richt. Uma into holed, ingenza noma unamathelise ukuvulwa nge Welding abandayo. Aluminium Pallets kuyehla Welding endaweni argon - ke yindlela engabizi futhi ngempumelelo ukubuyisela lento.
Njengoba ezothatha isikhundla pan amafutha
Yonke inqubo is evamile ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili: i-Ukudilizwa izingxenye ezilimele futhi ukufakwa kwesimiso esisha. Okokuqala ususe esibulalayo engakhi ibhethri, bese ahlukanisa edonsa emoyeni. Okulandelayo isuswe Ukuvikelwa motor. Amafutha kumelwe likhishelwe esitsheni efanelekayo. Khona-ke unscrewed imishudo phambi amandla unit, isimame isuswe, iyanqamula igrisi ezingeni inzwa. Ngemva kwalokho, isixhumi inqanyuliwe uwoyela ingcindezi inzwa. On izimoto nge automatic transmission namafutha imigqa Unqanyuliwe kulezi Pallet. Ngaphezu kwalokho isimame sisuswa futhi injini liphuma khona. Khona-ke ukususa phambi uhlelo entwasahlobo ukumiswa. Front oluvala amasondo amanga indophi sifulathele lid plastic. Ngemva lo msebenzi unscrewed iziqobosho phambi oluvala amasondo, kanye nemininingwane is ivinjelwe. Manje ungakwazi uyasikrufulula Pallet, ihambise phambili futhi aphansi. Ngemva kokufaka i-elementi amasha esikhundleni gasket. Kubalulekile ukusebenzisa sealant kuya sump ngesikhathi ukufakwa. Yikuphi ivumela ukuxhumana Friend, futhi ngemva esikhundleni ngeke angena uwoyela.
Indlela yokuvikela uwoyela sump ekulimaleni
Ukulungisa crankcase - hhayi injabulo ezishibhile, futhi imoto nge imbobo pan ne isivele leaked amafutha kumelwe futhi bawaletha kusayithi ukulungisa. Kungcono ngokushesha banakekele injini. I undertray injini kumele ukufakwa zonke izimoto, okuyinto ukuhamba emigwaqweni wezwe lakithi. Lena ishidi ekhethekile eyenziwe ngensimbi, aluminium, plastic, titanium noma insimbi engagqwali futhi ivale kusukela ngezansi injini.